Torohevitra hampiarahana amin'ny alika kely | Tontolo alika
Susy fontenla | | Training, Alika ankapobeny
El alika kely dia tsy maintsy ifandraisana ka hainao ny mifampiresaka amin'ny biby hafa sy amin'ny olona. Alika olon-dehibe manana olana amin'ny fiaraha-monina dia handray asa be dia be ary mazava ho azy fa hanana olana izy ireo, indraindray miaraka amin'ny herisetra, indraindray amin'ny tahotra na ny fampifanarahana, izany no antony maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'izy ireo rehefa zanak'alika izy ireo, mba hahafahan'izy ireo mianatra mifampiresaka voajanahary.
Andao hijery hevitra tsotra vitsivitsy ho an'ny ampio hifanerasera ilay alika kely. Ny volana voalohany sy ny fianarany amin'ny maha alika kely dia hanamarika ny fihetsiny ho alika olon-dehibe. Izany no antony tsy maintsy hanomezantsika ny lanja sahaza azy amin'io dingana alika io.
Zava-dehibe izany amin'ny volana voalohany amin'ny fiainana andao hampiditra biby hafa. Amin'ity tranga ity, ny alika manam-paharetana, alika manana toetra tsara, dia mety amin'ny asa. Hampianarin'izy ireo azy ny fomba fitondran-tena sy ny fifandraisana. Tokony hotadidintsika fa ny alika dia tsy tokony hivoaka ka hifangaro amin'ny alika hafa na biby fiompy raha tsy manana ny vaksiny, fa raha manana alika miaraka amin'ireo vaksiny miakatra amin'ny daty izay azontsika atolotra azy isika dia ho lavorary .
Puppies tsy mila fotsiny mifanerasera amin'ny alika hafa, fa miaraka amin'ny saka sy biby hafa ihany koa, mba hahafantaran'izy ireo ny fomba fitondran-tena amin'izy ireo. Fomba iray ampianarana azy ireo izay rehetra ho hitany izy io, ka very ny tahotra ary manova izany noho ny te hahafanta-javatra.
Tokony ho izy ireo mifanerasera amin'ny olona koa. Ilaina ny fifandraisana amin'ny olona. Azonay atao ny mampahafantatra anao ny mpianakavy rehetra ary mitondra azy ireo any amin'ny toerana ahafahanay mahita olona azon'izy ireo ifandraisana. Raha misy ankizy tsara kokoa, na dia tsy maintsy manazava azy ireo ihany koa aza isika ny fomba hihaonana amin'ny alika sy hampahafantatra ny tenany. Ny alika izay mifanerasera amin'ny biby fiompy sy olona marobe amin'ny diany alika kely dia biby mandanjalanja kokoa rehefa lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Torohevitra momba ny fiaraha-miasa amin'ny alika kely
Manao ahoana ny Brittany Epagneul